नेकपाको चियापानमा बामदेवलाई प्रश्न : प्रचण्ड कहिले प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ? – Khabar Silo
नेकपाको चियापानमा बामदेवलाई प्रश्न : प्रचण्ड कहिले प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ?
२९ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले केपी शर्मा ओलीपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन् ।
दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत र छठको पर्वका अवसरमा पार्टीले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता गौतमले तत्कालीन एमाले र माआवादीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् ।
पत्रकार र गौतमबीचको सवालजजवाफ
पत्रकार : प्रचण्ड कहिले प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ?
गौतम : वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीपछि
पत्रकार : ओली र प्रचण्ड साढे दुई–साढे दुई बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो ?
गौतम : हो
पत्रकार : त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ ?
गौतम : कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी भद्र सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो । यसको कार्यान्वयन हुने/नहुने भन्नेमा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु नै अन्योलमा रहेका बेला नेता गौत्तमले ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका हुन् । तर, उनले कहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छन भन्ने विषयमा भने केही भनेनन् ।
‘म उपचुनाव लड्दिन’
नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा संगठन विभागका प्रमुख समेत रहेका नेता गौतमले आगामी १४ मङ्सिरमा हुने उपचुनावमा आफू कतैबाट पनि नउठ्ने बताएका छन् ।
१४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका गरी विभिन्न ५१ पदका लागि उपचुनाव हुँदैछ । २०७४ को चुनावमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए । त्यसपछि उपचुनाव जितेर संसदमा जान उनले किनै प्रयत्न गरे । पछिल्लो पटक कास्की २ मा उम्मेदवार हुन खोजेका थिए ।
तर हालै मात्र उनले अब उम्मेदवार नहुने बताएका छन् । गौतमले भने, ‘म उपचुनाव लड्दिन ।’
‘५ बर्षभित्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ’
नेकपा नेता गौतमले आगामी पाँच बर्षभित्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुने दाबी पनि गरे । भ्रष्टाचार मौलायो भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ नि ! भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गौतम भन्छन्, ‘सरकार सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य लगर्ने दिशामा छ । अबको पाँच बर्षभित्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ।’
काठमाडौं– गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सचिव राईले माघ २० गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । २२ माघ २०७१ मा सचिवमा बढुवा भएका राई आगामी २२ गतेदेखि पदावधि सकिएर अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा नेपाल सरकारको […]
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच शुक्रबार बालुवाटारमा भएको तीन घन्टा लामो छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगी सकिएको छ। दुवै अध्यक्षले पार्टी एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दाका साक्षी विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई सँगै राखेर बालुवाटारमा वार्ता गरेका थिए। दुवैले आ-आफ्ना धारणा र व्याख्या सुनाएको स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।स्रोतअनुसार प्रचण्डले […]
संघीयता र लोकतन्त्र सिध्याउन नेकपा सरकार चीन पथमा हिड्यो : उपसभापति निधि
जनकपुर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार संघीयता र लोकतन्त्र विरोधी रहेको बताएका छन् । सोमबार धनुषाको नगराईन नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उपसभापति निधिले सरकार सङ्घियता र लोकतन्त्र सिध्याउने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका हुन् । चीनको पथमा हिडेको आरोप लगाउदै उनले नेकपा नेपालबाट संघीयता, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था […]
चिनियाँ स्याटलाइट बन्द हुँदा मोबाइल चलेन
विश्वभर सञ्चालित नेपाली रेष्टुरेन्टको विवरण संकलन सुरु